सुन भनेपछि किन हुरुक्क हुन्छन् नेपाली महिला ? - Sidha News
सुन भनेपछि किन हुरुक्क हुन्छन् नेपाली महिला ?
रेणुका पाण्डे देवकोटा
अरुलाई ठगेर, लुटेर र राज्यको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गरेर थुपार्नेहरु हाइहाइ हुने तर शिक्षक,प्राध्यापक जस्ता आदर्शमय पेशा जसले कसैको भविष्य निर्धारण गर्छ उनीहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। जसरी पनि पैसा नकमाइ नहुने स्थितिमा पुगेपछि मान्छे जे जस्तो अ प राध,बदमासीतिर पनि अग्रसर हुनपुग्छ। अन्तत: समाज दलालहरूको कब्जामा जान पुग्छ। जुन अहिले हामीकहाँ भैरहेको छ।